Nidoboka am-ponja ao Antsirabe : nalentiky ny kaonsilin’i Frantsa ilay vazaha nanolan-jaza | NewsMada
Nidoboka am-ponja ao Antsirabe : nalentiky ny kaonsilin’i Frantsa ilay vazaha nanolan-jaza
Par Taratra sur 09/03/2018
Natolotra ny fampanoavana, tao amin’ny Tribonalin’Antsirabe, afakomaly, ary naiditra am-ponja vonjimaika (MD), ilay vazaha frantsay, voarohirohy ho nanolana zazavavikely roa, tao Antsirabe. Tsy niaroaro fa vao mainka nandentika azy ny kaonsilin’i Frantsa miasa ao Antsirabe.
Natolotra ny fampanoavana, ny alarobia teo, ilay vazaha frantsay saika niharan’ny fitsaram-bahoaka tany Antsirabe, ny antoandron’ny talata 6 marsa teo. Naiditra am-ponja vonjimaika izy miandry ny fitsarana azy. Voalaza fa resaka hala-jaza ny saika namonoan’ny olona azy io, saingy fikasana hanolana indray ny fiampangana azy teny amin’ny fitsarana. ”Niaiky ity vazaha ity fa nisafosafo ireo zazavavy niisa roa nampiresahinay”, raha ny tatitry ny contrôleur général de police, Ramilison Céléstin. ”Efa nikitika ny fivavian’ireo zazavavy izy ka izay no nampiantsoantso ireo ankizy notambazany vola. Nolaviny kosa ny filazana azy ho saika hangala-jaza, izay saika namonoan’ny olona ilay vazaha”, raha ny fanazavana ihany.
Sao ihany fa niditra an-tsehatra ny polisy naka azy teo amin’ny fiara nitondra azy, fa raha tsy izany niharan’ny fitsaram-bahoaka izy io. Mbola narahin’ny olona hatreny amin’ny biraon’ny kaomisarian’ny polisy mihitsy izy io tamin’izany. Nitangorona teo ireo mponina tao Antsirabe, ka voatery nambenana mihitsy izany noho ny fiheverana sao hihoa-pefy ny olona. Nilaminaizany ihany anefa ary izao natolotra ny fampanoavana, omaly, izao.
Nandetika ny kaonsila
Nanoloana ity tranga ity, fantatra fa nandentika ity vahaza antitra ity ny kaonsilan’i Frantsa any Antsirabe. Izy ity izay niatrika ny fanaovany sonia ny fitanana an-tsoratry ny fanadihadiana. Nahatsapa izany ny tompon’andraikitra voalohany ireo teratany frantsay monina sy mandalo eto amintsika fa diso ny mpiray tanindrazana aminy. Matetika mantsy, arovana hatrany ireo teratany vahiny mandika lalàna eto amintsika, ary ampodiana izy ireo avy eo. Izay teratany malagasy tratra mandika lalàny any ivelany anefa, sady tsaraina any no gadraina any.
Tamin’ity, mba tsy afaka ilay vazaha, na fantatra aza fa mandalo ihany no ahatongavany eto, kanjo izao nikasa hanolana zazavavikely izao. Soa ihany fa tratra fa raha tsy izany, afa-maina teo izy ity. Andrasana ny fitsarana ny raharaha.